OROMO TECH – ORO CYBER WIKI
Yeroo baay'ee mobile keenya yeroo charge irratti bilbila haasonu namatti dhooha odeeffannoon jedhu bal'innaan tamsaasamaa ture haa tahu malee haga ammaatti dhohinsa haala sanaan uumamuun namoonni hedduun miidhamaa jiraachuun beekkamaadha. Kana dura mobile rakkoo akkanaa qabu mobile samsung qofa akka tahetti dubbatamaa ture wagga tokko dura mobile samsung note 7 jedhamu hojjatamee akkauma gabaaf raabsameen... Continue Reading →
Yeroo ammaa kana ilmi namaa ardii tana irra jiraatu irra caalaan mobile harkaa qaba kanumaan wal qabatee wantoonni hedduun ilma namaatiif yeroodha gara yerootti salphaa tahaa dhufanii jiran. Egaa akkuma jalqabarrati ibsine yeroo ammaa kanatti namoonni fiilmii gaggabaaboo fi akkasuma diraama garagaraa yokan video qophii adda addaa irratti waraabame haala gaariidhaan edit godhuudhaaf computer yokan... Continue Reading →
GARUU SHAMMARRAN NAMA HIN JIBBANII? Sababa ati hin beekneen shamarran ati gaafii jaalalaaa gaafattu marti akka si hin jaalanne yoo sitti himan Yeroo fi eddoo garagaraattis ilaalchi shamarran siif qaban eddo hundatti wal fakkaataa yoo tahe sana booda gafiin sila ana shamarran maaliif na jibban jedhu sammuu kee keessatti uumamuun hin hafu. Egaa gaafii kee... Continue Reading →